Hogaamiyaha ururka Al-qaacidda oo fariin u diray Al-Shabaab – Radio Daljir
Hogaamiyaha ururka Al-qaacidda oo fariin u diray Al-Shabaab
Al-Qaccida, May 12 -Hogaamiyaha ururka Al-Qaacidda Ayman Al-Zawaahiri ayaa soo saaray cajal Vedeo ah oo uu ku dhiiri gelinayo ururka Al-Shabaab inay sii wadaan dagaalka.
Cajal Vedeo ah oo lasoo dhigay bog ay shabakadda internetku ku leeyihiin Al-qaacidda ayuu ku sheegay hogaamiyaha ururka Al-Qaacidda Ayman Al- Zawahiri ururka Al-Shabaab oo dhowaan ku biiray Al-Qaacidda inay sii wadaan dagaalka, fariintiisa ayuu ku xusay Al-Shabaab inaysan u liicin duqaymaha ay fulinayaan diyaaradaha bilaa duuliyaha Drones-ka ee Maraykanku adeegsado.
Waa cajaladii labaad ee uu Zawaahiri u dirro Al-Shabaab, tan iyo markii ay Shabaabku ku biireen Al-Qaacidda bishii Febraayo.
Al-Shabaab ayaa waxaa ku kordhaya cadaadis kaga imaanaya ciidamada dowladaha gobolka iyo ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaasi dagaallo sadex qayb ah ku furay.
R/wasaaraha Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Cali ayaa isaguna bishii lasoo dhaafay sheegay in Al-Shabaab ay u guurayaan waqooyiga Soomaaliya gaar ahaana dhulkamaa Puntland.